Faysal Cali Waraabe oo hadlay si aan looga baran ( AQRISO) | Baydhabo Online
Faysal Cali Waraabe oo hadlay si aan looga baran ( AQRISO)
Faysal Cali Waraabe, Gudoomiyaha Xisbiga Ucid ee Somaliland, ayaa waxaa uu si dareen leh uu kaga hadlay marxaladda uu maanta ku sugan yahay dalka Somaliya.
Gudoomiyaha, ayaa dhaliil cannaan u muuqatay u jeediyay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo uu maldahay qaabka uu Soomaali ku hogaaminaayo aanu ahayn mid isu soo dhaween kara Soomaalida.
“Xasan Sheekh baan la hadlayaa. Xasan Sheekh waxaan leeyahay Soomaali sida aad ku wadaa nabad keeni mayso, qay-qaybiska iyo danta kursigaaga ka horeynsiin danta Soomaalida mid soconayso maaha. Waxaa laguu doortay in umadda danteeda ka horeysiisaa, nabad ku soo dhalisaa Soomaaliya Talyaaniga haysan jiray.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Xisbiga Ucid.
Gudoomiyaha, ayaa yiri “Somaliland xumaanteeda iyo shirqoolkeedu lagama faa’iido. Somaliland waa dalkii 60-kii xorta ahaa, maanta waa xor, gacanta anagaa ku hayna, xumaanta naga daa. Dadkaa isu direysid ee awood aad lahayn isticmaaleysid, dhulkaaga maamul ka samey.”
Waxaa kaloo uu yiri “Degmo qura aad degtaan oo maamul lihi majirto. Maamulo malahan Cadaado, Dhuusamareeb, Baledweyne, Balcad iyo Jowhar, meel aad degtaan oo ka dhisan maamulo, maleh. Soomaali isuma keeni kartit, haddaad deegaankaagii hagaajin. Soomaali dadkii isu keeni lahaa way ka baxeen maanta, adna ninkii u lahaa hiddaa isugu keentit matihid baan ku leeyahay.”
Faysal Cali Waraabe, ayaa si dareen leh u sheegay in Shanta Soomaali (Somaliwayn) ay tahay mid qura, isla-markaana ay wada leeyihiin cadow keliya.
“Soomaalida waxaan leeyahay Shanta Soomaaliyeedba waa isu mid, isu cad baynu nahay, wixii Soomaali ka xuna, way naga xun yihiin, wixii NFD ka xun, way naga xun yihiin, wixii Jabuuti ka xun, way naga xun yihiin, kan Jigjiga ka xun, waa naga xun yahay, hal cad oo quraa isu nahay.” Ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
Isagoo hadalkiisa sii wata, ayuu yiri “Waxaa loo baahan yahay caqli la keeno, caqli fiican la keeno, magacii Soomaali wuu baaba’ay, waad aragtaan maanta dadkeenii. 22 kun oo ciidamo shisheeya ah, oo ujeedo kala jeeda leh ayaa maanta Soomaaliya joogta. Ilama aha inay nabad ka keenayan dadkaasi. Nabad waxaa ka keenaya dadka Soomaaliyeed.”
Ina Waraabe, ayaa yiri “Insha’Allaha, anaguna haddaan nahay reer Somaliland waxaan ciyaari doonnaa doorkayaga muqadaska ah, sidii dhulkaa nabad looga samayn lahaa. Waanu ka soo dhex geli doonnaa Insha’Allah.”
Mr Waraabe, ayaa Alle ka baryay in Soomaalidu uu quluubtoodu isu soo duwo, hogaan wanaagsana oo u yeelo, isla-markaana uu jebiyo cadowgooda.
Waa markii ugu horeysay oo hadal noociisa ah uu ka soo yeero, tan iyo markii uu Siyaasadda Soomaalida ku soo biiray, wixii ka dambeeyay gooni isu taaggii Somaliland.